यो हो करोडपति परेवा जसको नाममा सयौं बिघा जमीन र लाखौँ नगद ? – American Nepali News
यो हो करोडपति परेवा जसको नाममा सयौं बिघा जमीन र लाखौँ नगद ?
January 12, 2022 adminLeaveaComment on यो हो करोडपति परेवा जसको नाममा सयौं बिघा जमीन र लाखौँ नगद ?
मानिसको नाममा लाखौं करोडौंको सम्पत्ति हुनु अनौठो होइन । तर जनावर तथा चराचुरुंगीको नाममा करोडौंको सम्पत्ति हुनु चाहीँ आश्चर्य नै हो । यस्तै आश्चर्य छिमेकी मुलुक भारतमा छ । त्यहाँ करोडपति परेवाहरू छन् । पत्यार नलाग्न सक्दछ, तर ती परेवाहरू यति धनी छन् कि उनीहरूको नाममा दर्जनौं पसलहरू, सयौं बिघा जमिन र लाखौँ रुपैयाँ नगद सम्पत्ति छ । राजस्थानको नागौर जिल्लास्थित जसनगर गाउँमा ती परेवाहरूको नाममा करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति छ ।
परेवाको नाममा २७ वटा पसल, १२६ बिघा जमीन र बैंक खातामा ३० लाख भारु मौज्दात छ । यतिमात्रै होइन ती परेवाहरूको नाममा १० बिघा जमीनमा सञ्चालित ४७० वटा गाई रहेको गौशाला पनि रहेको छ । वास्तवमा ४० वर्षअघि पूर्वसरपञ्च रामदीन चोटियाको निर्देशनमा दुई उद्योगपतिहरूले उक्त परेवा कोषको स्थापना गरेका थिए ।
कोषले दैनिक करीब चार हजार भारु खर्च गरेर तीन बोरा धान परेवालाई खुवाउने गर्दछ । गौशालाका गाईका लागि पनि दानापानीको व्यवस्था कोषले गर्दछ । पसलको भाडा, दूध बिक्री तथा कृषि भूमिको भाडाबाट हुने आय पनि परेवा कोषमा दाखेल गरिन्छ । परेवा संरक्षण तथा पालनमा हुने खर्च कटाएर बाँकी रकम बैंकमा राखिएको छ । एजेन्सी
मिलमा सल बे’रिएर महिलाको मृत्यु « Etajakhabar